Xidigaha Caalamka – Page 33 – Somali World
Home Xidigaha Caalamka (page 33)
Xamda Yar Xidigad cusub oo fanka Somaliyeed uso baxday
Comments Off on Xamda Yar Xidigad cusub oo fanka Somaliyeed uso baxday
Xamda Cabdilaahi oo ku caan ah “XAMDA YAR” ama “YARYARO” oo ah fanaanad Somaliyeed oo da’ yar oo iyadoo mudo yar fanka ku jirtay Hilaac iyo hami wayn ku hanatay quluubta shacabka Somaliyeed meel walba oo ay joogan gaar ahan shacab weynaha ku nool Hoyga fanka iyo suugaanta Somaaliyeed e Hargeysa oo ah Magaalada ay fanka ka Bilowday ay kuna …
MBC Group oo u Dabaaldagtay Sanad guuradeedi 25aad
Comments Off on MBC Group oo u Dabaaldagtay Sanad guuradeedi 25aad
MBC GROUP oo ka mid ah Channelska loogu daawashada badanyahay aduunka gaar ahaan Wadamada Carbeed oo u dabaaldagtay Sanadguuradi 25aad ee kaso wareegtay Aasaaskedi iyo Guulihi waaweynaa e ay gaadhen iyagoo bilowgii ilaa hada haysta Kaalinta koowaad Bariga dhexe iyo woqooyiga Afrika xaga daawashada. Xafladaas oo ka dhacday caasimada Lebanon ee Beirout oy kana so qayb galeen Wariyaayasha MBC oo …
ELISSA oo Albumkedi Cusbaa Daaha ka qaaday
Comments Off on ELISSA oo Albumkedi Cusbaa Daaha ka qaaday
Xidigada caanbaxday ee u dhalatay wadanka Lubnaan ee ELISSA oo Bishan Gudaheedi Albumkeedi inta badan la sugayay Daaha ka qaaday iyadoo ugu magac Dartay “SAHARNA YA LEYL”. Albumkan oo ay ku jiraan 16 Heesood oo iskugu jira laba Lahjadood oo kala ah Masri iyo Lubnaani ah lana saaray music casri oo macaan oo dhagaha dhagaystayaasha so jiitay. Albumkan aya isla …
Yaa ka dambeeyey warkii beenta aha ee Geerida Hibo Nuura?
Comments Off on Yaa ka dambeeyey warkii beenta aha ee Geerida Hibo Nuura?
Waxa Usbuuci lasoo dhaafay dhagaha shacabka kusoo dhacayay war been ah oo aad u naxdin badan, Oo sheegaya in ay London ku geeriyootay fanaanadi weyneed ee Waaberi Hibo Nuura warkaas oo ka nixiyay bulshada Somaliyeed meel waloy joogan. Waxaana warkan suuqa so galiyay rag websites caato ah leh oo Lacag doonti meel xun ka gashay. Ugu dambayntii waxaan ugu baaqayna …
Lamaanihii Hollywood ugu caansanaa oo kala tagay
Comments Off on Lamaanihii Hollywood ugu caansanaa oo kala tagay
Lamaanihii ugu caansana Hollywood ee Angelina Jolie iyo Brad Pitt oo ahaa Lamaane tusaale loogu soo qaadan jiray Jaceylka iyo wadajirka ama is Fahanka dadka is jecel aya shaaciyay Bishan Gudaheedi inay si rasmi ah u kala Tageen Khilaaf weyn oo soo kala dhex galay ka dib. Sababta keentay furniinka ilaa hada lama garan karo laakin Saxaafada Hollywood aya waxa …
Nimco Dareen oo Furinle LONDON u Raacaysa
Comments Off on Nimco Dareen oo Furinle LONDON u Raacaysa
Fanaanada caan baxday Nimco Muxumed Xassan “Nimco Dareen” oo Mudo dheer ku sugneed dhulkeeda Hooyo ee Casimada Dawlad Deeganka Somalida Itoobiya DDSI ee Jigjiga aya Usbuucan gudihiisi safar lama filaana ugu soo baxday Addis ababa iyado kusii jeeda Cariga Ingiriiska halkaas oo ay deganeed. Ilo ku dhaw fanaanada aya shegaya inay u tagayso halkaas Xaflad aroos oo ay leeyihin eheladeda …
in : Xidigaha Caalamka
Page 33 of 33First...10202930313233